Kansarka lafaha - Sababta, ogaanshaha, dawaynta iyo dawaynta.
Kansarka lafaha lafdhabarta ayaa ah dhaca ku dhaca unugyada aan caadiga ahayn ee unugyada. Kansarka lafaha laf-dhabarku wuxuu noqon karaa waxyeello ama malignant, wuxuuna ku dhici karaa lafta laftiisa ama koritaan laf laftiisa. Kansarku wuxuu u horseedi karaa xanuun aan faahfaahintiisa la hayn, xanuunka lugta oo ka sii daraysa, barar iyo in ay kordhaan dhacdooyinka jab / jab. Ogaanshaha waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo imaging (Raajo, CT ama MR), laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa lagama maarmaan in la qaado sambal unug, oo loo yaqaan biopsy, si loo xaqiijiyo shakiga.
- Waa maxay faraqa u dhexeeya kansarka aasaasiga ah iyo metastasis?
Sidii aan soo sheegnayba, kansarka wuxuu noqon karaa waxyeello iyo malign. Kansarka loo yaqaan 'Benign cancer' micnaheedu waa kansarka ku faafaa qaybaha kale ee jirka. Kansarka daran wuxuu keenaa waxa loo yaqaan 'metastasis', oo macnaheedu yahay ku faafo qaybaha kale ee jirka. Noocyo kala duwan oo kansarka aasaasiga ah ee faafa ayaa ku faafi kara qeybaha kala duwan ee jirka.
Markaan kahadalno kansarka aasaasiga ah, marka loo eego kansarka lafaha, waxaan ula jeedaa kansarka laga sameeyay ama lafta. Cudurka kansarka ee loo yaqaan 'metastasis metastasis' ayaa la rumeysan yahay inuu jiro kansar kale oo aasaasi ah (tusaale. Kansarka naasaha ama kansarka qanjirka 'prostate') kaasoo ku faafay xajmiga lafaha.
Kansarka lafaha aan caadiga ahayn ayaa aad uga badan kansarka lafaha xun
Nasiib wanaagse, kansarka aasaasiga ah ee kansarku aad ayuu u yar yahay. Dalka Mareykanka, waxaa lagu qiyaasaa in 2500 oo keliya ay helaan baaritaanka noocaas ah ee kansarka sanadkiiba. Tiradani waxay ka reebaysaa ogaanshaha cudurka myeloma-da badan (oo loo yaqaanno myeloma badan oo Ingiriis ah), oo ah nooc kansar ah oo inta badan ku dhaca dhuuxa lafta oo aan ku dhicin lakabka sare ee lafaha.
Astaamaha kansarka lafaha
Calaamadaha ugu horreeya ee kansarka lafaha ayaa laga yaabaa inuu xanuun ku yeesho laftiisa laftiisa, oo si khaldan loo tarjumi karo ama la dareemi karo xanuun sii kordhaya. Calaamadda ugu horreysa ee kansarka lafaha waxay noqon kartaa barar ama buruq aan xanuunayn. Tani waxay si tartiib tartiib ah u noqon kartaa mid xanuun badan xanuunkuna markaa si tartiib tartiib ah ayuu u sii xumaanayaa. Inbadan waxay xanuunka ku tilmaamaan ereyo sida ilko xanuun badan. Dabeecad ahaan, xanuunku waa mid joogto ah oo nasasho iyo habeen ah. Burooyinka kansarka ah waxay daciifin karaan qaabdhismeedka lafaha illaa ay aakhirka u horseedaan waxa loogu yeero jabka cudurrada Jabka jabka ah ee ay ahayd inaysan ku dhicin qaab dhismeedka lafta caadiga ah.
Sidee loo ogaadaa kansarka lafaha?
Xanuun daba dheeraaday, xanuun joogto ah ama xagjirnimo waa in la baaro X-ray. Raajo ayaa muujin karta inuu jiro korriin unugyo aan caadi ahayn oo unugyada jirka ah iyo wixii la mid ah, laakiin way adkaan kartaa in la qeexo inay yihiin kuwo aan fiicnayn ama kuwo xun. Waa in la sheegaa inay jiraan dhowr nooc oo kansarka lafaha ah iyo xaaladaha lafaha oo lagu qeexi karo raajada, oo ay ka mid yihiin cudurka Paget, chondroma, qanjidhada lafaha, fibroma non-osseous (koritaanka burooyinka leh unugyada lafaha, oo loo yaqaan 'nonossifying fibroma in English') iyo fibrous dysplasia (fibrous dysplasia on norsk).
Haddii baaritaanka raajada uusan aheyn mid la soo gebogebeyn karo, waxaad ku buuxin kartaa hal Baaritaanka MRI eller CT sawirka - baadhitaanka noocan ahi wuxuu awoodi doonaa inuu qiyaaso cabbirka saxda ah iyo goobta, taas oo iyaduna keenta macluumaad qiimo leh marka ay timaaddo baadhitaanka saxda ah. Xidhiidhka ugu dambeeya ee cudurka waa mid biopsy, halkaad qalliin unug uga soo qaadanaysid adigoo irbad cirbad gelinaayo aagga ay dhibaatadu ka dhacday. Dhibaatada ayaa ah inaad runtii bambo ku dhigi karto unugyada kansarka laftooda. Marka xitaa baaritaanka noocan ah 100% ma ahan mid badbaado leh.
Liiska noocyada kala duwan ee kansarka lafaha
Qaababka kansarka lafaha
- Kabax buro unugyada jeermiga
Noocyada kansarka lafaha ee aasaasiga ah
- myeloma (oo sidoo kale loogu yaqaanay myeloma badan oo Ingiriis ah)
- Histiocytoma xanuun daran
- Sarcoma Ewing
- Laf-dheerta laf-dhabarta / unugyada loo yaqaan 'reticulum cell sarcoma'
- Burooyinka unugyada jeermis dilaaga ah
- Kansarka naasaha, kansarka sanbabada, kansarka qanjirka 'prostate', kansarka kilyaha, kansarka qanjirka 'thyroid' iyo kansarka mindhicirka weyn wey ku faafi karaan lafaha.
- Ciladda waxaa lagu xaqiijin karaa sawir iyo haddii loo baahdo; biopsiga.
- Noocyada daaweynta waxaa ka mid ah shucaac, kiimiko ku daaweyn iyo / ama qalliin. Waxaa la qabtay tobanaankii sano ee la soo dhaafay horumarka weyn ee daaweynta kansarka (Iskuxiran PubMed).